Tanintharyi Region Poised for More Development | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceTanintharyi Region Poised for More Development
Tanintharyi Region Poised for More Development
By Zin Thu Tun
The southern Tanintharyi Region has received 44 foreign direct investments worth over $2.3 billion in the three decades from 1988 to October 2019, according to remarks by Vice President U Myint Swe ataDecember7Investment Forum in Myeik City.
The region has also received 71 investments in energy, hotel and tourism, housing development and agriculture worthatotal of $233.96 million (K282.326 billion) from local investors.
As Myanmar’s southernmost gateway to the greater Mekong sub-region, Tanintharyi playsacritical role in the Southern Economic Corridor (SEC).
U Myint Swe said that the implementation of the Dawei Special Economic Zone will contribute to the development of the region, and in carrying out the broader development activities the government is taking examples from countries that have successfully developed their own coastal areas.
With the development ofadeep-sea port and industrial zone, Tanintharyi will grow in importance asajuncture between the greater Mekong sub-region and other markets including the Middle East and India.
As part of the Dawei SEZ project,a138-k.m., two-lane road, will be built next year connecting the SEZ and the Thai-Myanmar border and helping to streamline trade flows between the two countries.
Tanintharyi Region has natural pearl production, pearl farming, seafood, rubber and palm oil plantation, bird’s nest production and mining. Its beautiful beaches and islands also make it ripe for nature-based tourism.
Developing the region will help Myanmar integrate better with other regional economies in line with the ASEAN Economic Community Blueprint 2025.
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလအထိ လုပ်ငန်း ပေါင်း(၄၄)ခု၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၂ဒသမ၃) ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့၌ ဒီဇင်ဘာ(၇)ရက်က ကျင်းပသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖိုရမ်(၂၀၁၉) တွင် နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦးမြင့်ဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေဖြင့် လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း (၇၁)ခုရှိပြီး စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၃၃ ဒသမ ၉၆) သန်း (ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၈၂၃၂၆ ဒသမ ၁၆၃) ထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ အိမ်ရာအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍနှင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတို့တွင် ဖြစ်သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည် မဟာမဲခေါင်၏ အနောက်ဖက်ဆုံးဝင်ပေါက်သဖွယ်ဖြစ်နေပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် တောင်ပိုင်းစီးပွားရေးစြင်္ကံ (Southern Economic Corridor – SEC) သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် အရေးပါသည့်နေရာတွင် တည်ရှိနေပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ကမ်းရိုးတန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆောင်ရွက်ချက်များကို နမူနာယူ၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတစ်လျှောက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို တည်ထောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်တွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် စက်မှုဇုန်များဖော်ဆောင် ပေး ခြင်းဖြင့် မဟာမဲခေါင်တောင်ပိုင်း စီးပွားရေးစြင်္ကံနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ အိန္ဒိယစသည့် ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်နေရာအဖြစ် အရေးပါလာမည်ဖြစ်ကြောင်းထည့်ပြောခဲ့သည်။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ကနဦးစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သည့် ၁၃၈ကီလိုမီတာရှည်လျားသော နှစ်လမ်းသွားကားလမ်းကို လာမည့်နှစ်တွင်ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန်မှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ထီးခီးအထိ ပေါက်မည့်လမ်းကြောင့်နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ကူးသန်းမှှုလည်းပိုမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒေသတွင်း အဓိကထုတ်ကုန်များဖြစ်သော သဘာဝပုလဲနှင့် မွေးမြူရေးပုလဲလုပ်ငန်း၊ ပင်လယ်ရေထွက်ကုန်များ၊ ရာဘာနှင့် ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ငှက်သိုက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် သတ္ထုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတည်ရှိသည်။
ထို့ပြင် ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့် ကျွန်းများ၏ သဘာဝအလှတရားများ ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့် သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဓိကအရေးပါသည့် ကဏ္ဍအဖြစ်ပါဝင်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ကို ဖော်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထား သောကြောင့် ထားဝယ်စီးပွားရေးဇုန်ပေါ်လာပါက လူအချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ချိတ်ဆက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ဒုတိယသမ္မတ(၁)က ပြောခဲ့သည်။
Previous articleYCDC to Open Restaurants in Yangon Parks
Next articleIKBZ, Mitsui Sumitomo Form Insurance Joint Venture